စူပါတိုငျဖှနျး ငလြှငျ မုနျတိုငျ ဂပြနျနိုငျငံဝငျရောကျနပွေီ (ရုပျသံ) - MM Live News
ဖိလဈပိုငျ မိုးဇလ က နာမညျပေးလိုကျတဲ့ Typhoon Hagibis ဖိလဈပိုငျဘာသာနဲ့ဟာဂီးဘီး (အလငျြ) မုနျတိုငျး ဟာ ပစိဖိ သမုဒ်ဒရာ အနောကျပိုငျး Pacific Oceanမှာ ပိုမိုအားကောငျးလာတာတှရေ့ပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံကို ဝငျရောကျတိုက်ခိုကျနပေါပီငလငျြမုနျတိုငျးရဲ့ လတေိုကျအားက ကညျြဆံရထား အရှိနျလို တနာရီ ၁၉၅ မိုငျအထိ အငျအားပွငျးထနျပါတယျ။
မုနျတိုငျးရဲ့ အရှယျအစားကို ကွညျ့ရငျ ၂၀၀၀ ကီလိုမီတာပတျလညျ ရှိပွီး အာရှကို ထီးဖွူမိုးထားတဲ့အတိုငျး အဖွူလုံး တိမျတိုကျကွီးကို တှရေ့ပါယျ။၈ပြနျနိုငျငံ ပွညျနယျ(၈)ပွညျနယျ ကို ကမျးခွပေိုငျးကနေ ဝှဝေို့ကျပတျတိုကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံတောငျပိုငျး ပငျလယျနဲ့အနီးဆုံး ခရိုငျတှမှောတော့ မုနျတိုငျးသတိခကျြ ထုတျပွနျနတောတှရေ့ပါတယျ။ ဒီမုနျတိုငျးကွောငျ့ ထိုငျး နိုငျငံမှာ အောကျတိုဘာ ဆောငျးရာသီပြောကျသှားခဲ့ပွီး အပူခြိနျတှေ ပွနျတကျလာနပေါတယျ။
ကွီးမားပွငျးထနျပွီး အန်တရယျရှိတဲ့ တိုငျးဖှနျးမုနျတိုငျးတဈခုပါ. ဂပြနျအစိုးရကိုယျတိုငျလညျး Nagoya နဲ့ တိုကြိူအနီးတဝိုကျမှာရှိတဲ့ ပွညျသူတှကေို ကွိုတငျကာကှယျမှုမြားပွုလုပျထားရနျနဲ့ အသကျဘေးကာကှယျရနျ နိူးဆျောတိုကျတှနျးထားပါတယျ. ….ဒီမုနျတိုငျးဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျးအပွငျထန
ျဆုံးမုနျတိုငျးထဲပါဝငျပါသလို 1958 ခုနှဈက Kanto ဒသေနဲ့ Izu archipelago တို့မှာတိုကျခတျခဲ့တဲ့ မုနျတိုငျးလိုမြိူး လူပေါငျး ၁၂၀၀ ဝနျးကငျြအထိ အသကျဆုံးရှူံးလာနိူငျတဲ့ မုနိတိုငျးတဈခုလိုမြိူးဖွဈလာနိူငျပါတယျ။
မုနိတိုငျးနဲ့ အတူပါလာမဲ့ မိုးကလညျး စံခြိနျတငျ မိုးရခြေိနျဖွဈလာပွီး Tokyoနဲ့ အနီးတဈဝိုကျမှာတော့ မိုးရခြေိနျ 750mm အထိရှိနိူငျပွီး Nagoya မှာတော့ 1000mm အထိ မိုးပွငျးထနျစှာရှာသှနျးနိုငျပါတယျ ……
လတေိုကျနူနျးကတော့ တဈစက်ကနျ့ကို ၅၀m အနညျးဆုံးရှိပွီး တဈနာရီလတေိုကျနူနျးက ဂပြနျကားတှေ အမွနျဆုံးမောငျးနှငျနိူငျတဲ့ အရှိနျထကျ ပိုမြားနိူငျပါတယျ။အနညျးဆုံး (180kph) ပါ. မပေါ့ဆပဲနဲ့ အစားအစာနဲ့ သောကျရေ ကွိုတငျစုဆောငိးထားသငိ့ပါတယျ။
အစားအစာတှကေိုလညျး မခကျြမပွုတျပဲနဲ့ အသငျ့စားနိူငျတဲ့ အစားအသောကျမြိူးကွိုတငျဝယျစုထားသငျ့ပါတယျ ( မီးအားပွတျတောကျဖို့ အခှငျ့အရေးမြားပါတယျ ) ပငျလယျကမျးစပျနဲ့ နီးတဲ့နရောတှေ ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျအမွငျ့နဲ့ သိပျမကှာတဲ့ ဒသေအနီးအနားမှာ နထေိုငျတဲု့သူတှအေနနေဲ့ ပိုပွီးသတိထားရမဲ့ အခကျြကတော့ မုနျတိုငျးတိုကျနစေဉျ ……
ပငျလယျရလှေိူငျးအမွငျ့က ပေ၃၀ ကြျော အထိကွီးမားပွီး ကုနျးမွအေထိပါရတေကျလာမှာမို့ ရဘေေးရှောငျရနျနရောမြား ကွိုတငျသိရှိနိူငျဖို့လိုအပျပါတယျ။မုနျတိုငျးဝငျလာမဲ့ ပွညျနယျအနီးတဝိုကျက ပွညျတှငျးသယျယူပို့ဆောငျရေးတျောတျောမြားမြားလညျး စနနေမှော ခတ်တခန ရပျဆိုငျးထားမှာဖွဈပွီး …..
Narita နဲ့ Haneda လဆေိပျက လယောဉျပြံသနျးမှူမြာူလညျး အကုနျ Cancelled လုပျထားပါတယျ. ကြေးဇူးပွုပွီး ဂပြနျပွညျတှငျးမှာနထေိုငျတဲ့ မုနျးတိုငျးဝငျလာမဲ့ ဒသေက မွနျမာလူမြိူးမြား အနဖွေငျ့ ဖုနျးအားမြားအပွညျ့သှငျးထားရနျနဲ့ မုနျတိုငျးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို အဆကျမပွတျသိရှိနိူငျဖို့နဲ့ မိမိအသကျအန်တရယျမထိခိုကျမိအောငျနဖေို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျခငျဗြ။crd-Saw
ဖိလစ်ပိုင် မိုးဇလ က နာမည်ပေးလိုက်တဲ့ Typhoon Hagibis ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာနဲ့ဟာဂီးဘီး (အလျင်) မုန်တိုင်း ဟာ ပစိဖိ သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်း Pacific Oceanမှာ ပိုမိုအားကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်တိုက္ခိုက်နေပါပီငလျင်မုန်တိုင်းရဲ့ လေတိုက်အားက ကျည်ဆံရထား အရှိန်လို တနာရီ ၁၉၅ မိုင်အထိ အင်အားပြင်းထန်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းရဲ့ အရွယ်အစားကို ကြည့်ရင် ၂၀၀၀ ကီလိုမီတာပတ်လည် ရှိပြီး အာရှကို ထီးဖြူမိုးထားတဲ့အတိုင်း အဖြူလုံး တိမ်တိုက်ကြီးကို တွေ့ရပါယ်။၈ျပန်နိုင်ငံ ပြည်နယ်(၈)ပြည်နယ် ကို ကမ်းခြေပိုင်းကနေ ဝှေ့ဝိုက်ပတ်တိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ပင်လယ်နဲ့အနီးဆုံး ခရိုင်တွေမှာတော့ မုန်တိုင်းသတိချက် ထုတ်ပြန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် ထိုင်း နိုင်ငံမှာ အောက်တိုဘာ ဆောင်းရာသီပျောက်သွားခဲ့ပြီး အပူချိန်တွေ ပြန်တက်လာနေပါတယ်။
ကြီးမားပြင်းထန်ပြီး အန္တရယ်ရှိတဲ့ တိုင်းဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုပါ. ဂျပန်အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်း Nagoya နဲ့ တိုကျိူအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားရန်နဲ့ အသက်ဘေးကာကွယ်ရန် နိူးဆော်တိုက်တွန်းထားပါတယ်. ….ဒီမုန်တိုင်းဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းအပြင်ထန
်ဆုံးမုန်တိုင်းထဲပါဝင်ပါသလို 1958 ခုနှစ်က Kanto ဒေသနဲ့ Izu archipelago တို့မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်းလိုမျိူး လူပေါင်း ၁၂၀၀ ဝန်းကျင်အထိ အသက်ဆုံးရှူံးလာနိူင်တဲ့ မုနိတိုင်းတစ်ခုလိုမျိူးဖြစ်လာနိူင်ပါတယ်။
မုနိတိုင်းနဲ့ အတူပါလာမဲ့ မိုးကလည်း စံချိန်တင် မိုးရေချိန်ဖြစ်လာပြီး Tokyoနဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့ မိုးရေချိန် 750mm အထိရှိနိူင်ပြီး Nagoya မှာတော့ 1000mm အထိ မိုးပြင်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ် ……
လေတိုက်နူန်းကတော့ တစ်စက္ကန့်ကို ၅၀m အနည်းဆုံးရှိပြီး တစ်နာရီလေတိုက်နူန်းက ဂျပန်ကားတွေ အမြန်ဆုံးမောင်းနှင်နိူင်တဲ့ အရှိန်ထက် ပိုများနိူင်ပါတယ်…အနည်းဆုံး (180kph) ပါ. မပေါ့ဆပဲနဲ့ အစားအစာနဲ့ သောက်ရေ ကြိုတင်စုဆောငိးထားသငိ့ပါတယ်။
အစားအစာတွေကိုလည်း မချက်မပြုတ်ပဲနဲ့ အသင့်စားနိူင်တဲ့ အစားအသောက်မျိူးကြိုတင်ဝယ်စုထားသင့်ပါတယ် ( မီးအားပြတ်တောက်ဖို့ အခွင့်အရေးများပါတယ် ) ပင်လယ်ကမ်းစပ်နဲ့ နီးတဲ့နေရာတွေ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်နဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ ဒေသအနီးအနားမှာ နေထိုင်တဲု့သူတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးသတိထားရမဲ့ အချက်ကတော့ မုန်တိုင်းတိုက်နေစဉ် ……
ပင်လယ်ရေလှိူင်းအမြင့်က ပေ၃၀ ကျော် အထိကြီးမားပြီး ကုန်းမြေအထိပါရေတက်လာမှာမို့ ရေဘေးရှောင်ရန်နေရာများ ကြိုတင်သိရှိနိူင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းဝင်လာမဲ့ ပြည်နယ်အနီးတဝိုက်က ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတော်တော်များများလည်း စနေနေမှာ ခတ္တခန ရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်ပြီး …..
Narita နဲ့ Haneda လေဆိပ်က လေယာဉ်ပျံသန်းမှူမျာူလည်း အကုန် Cancelled လုပ်ထားပါတယ်. ကျေးဇူးပြုပြီး ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ မုန်းတိုင်းဝင်လာမဲ့ ဒေသက မြန်မာလူမျိူးများ အနေဖြင့် ဖုန်းအားများအပြည့်သွင်းထားရန်နဲ့ မုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အဆက်မပြတ်သိရှိနိူင်ဖို့နဲ့ မိမိအသက်အန္တရယ်မထိခိုက်မိအောင်နေဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။crd-Saw
ဖူးစာရှငျကို အိပျမကျထဲမှာ မွငျဖူးခငျြတဲ့အခါ ဒီနညျးလမျး သုံးကွညျ့ပါ…
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းနေမုန်တိုင်းကြီးကြောင့် ကမ္ဘာကြီးမှောင်အတိကျသွားဖွယ်ရှိကြောင်း နာဆာက အတည်ပြု
November 17, 2018 MM Live
ဘုန်းကြီးကျောင်းအားဝင်ရောက်ပစ်ခတ် ဆရာတော်အပါအ၀င် သံဃာများ ပျံလွန် ဒဏ်ရာရ